I-SACP yethule isifundo sika-OR Tambo | Eyethu News
I-SACP yethule isifundo sika-OR Tambo
“ Ithi ayeneme ngombimbi neqembu elibusayo.”
UNobhala Jikelele weSouth African Communist Party (SACP) uMnuz Blade Nzimande nobuholi beMagwaza Maphalala District beSACP obebuseMlazi Cinema ngeSonto. Isithombe: Sabelo Ngema.
UNOBHALA weSouth African Communist Party (SACP) uMnuz Blade Nzimande uthi ubuntekenteke obuphakathi kwabo ne-African National Congress (ANC) bungase budale uqhekeko, okufanele lugwenywe ngazo zonke izindlela.
UMnuz Nzimande ukusho lokhu esifundweni sowayengumengameli we-ANC isikhathi eside u-Mnuz Oliver Reginald Tambo ebesisehholo laseMlazi Cinema kwa-W ngeSonto.
“Angisazizwa sinobudlelwano ne-ANC kodwa sinobudlelwano neningi layo. Asizibuze maqabane ukuthi kudalwa yini lokhu esikubona kwenzeka ku-ANC, singakugwema kanjani uma kuthiwa sesizimele,” kusho uMnuz Nzimande.
Ukhulume ngamaphuzu amaningi asemqoka kwaphinde wadedelwa nemibuzo khona lapho.
UMnuz Nzimande ucaphune amazwi ka-Oliver Tambo awasho ngo 1991 eWestville eThekwini athi:
“Ngithathe yonke leminyaka ngiwubhekile lombutho, ngiwukhusele, manje ngiyawubuyisa umkhulu, unamandla, ngicela ubeyimbumba, wugadeni, niwuphathise okwezikhali zamaNtungwa,” esho.
“UTambo wayeyizonda inkohlakalo neqembu labantu elingavumelani neningi. Wakhethwa waba ngunobhala weqembu ngo 1955.
Waqala uphiko lwentsha ngo-1944, waphinde waba ngunobhala wayo. Usebenze kakhulu noMnuz Nelson Mandela,” kusho uMnuz Nzimande.
Uthi ukube usaphila ngabe uhlanganisa iminyaka engama-100 kulonyaka.
Sekudedelwa imibuzo amanye amakhomanisi aphakamise ukuthi akuhlukwane phakathi, bazikhankasele ngokuzimela okhethweni olulandelayo.
UMnuz Gwajo Zulu waseMlazi uthi uma ufake isikibha samakhomanisi emhlanganweni we-ANC awumukeleki ngendlela.
“Akuvele kuhlukwane phakathi ngoba sekunzima ngisho ukuvuselela ubulunga kuKhongolose,” esho uMnuz Gwajo.
Phakathi kwezikhulu ebezikhona kubalwa uMnuz Eric Stalin Mtshali, unobhala wamakhomanisi kulesi sifundazwe uMnuz Themba Mthembu, owayeyiMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo, ikhansela laseMlazi uMnuz S’thenjwa Nyawose nabanye.
Alusalanga udaba lokubulawa kwabantu eNtshanga, kuphakanyiswe ukuthi i-ANC ngokubambisana neSACP ayingenelele ekuxazululweni kwale nkinga ngoba isazolokhu iqubukile.
Okhulumela i-ANC KwaZulu-Natali uMnuz Mdumiseni Ntuli uthi i-SACP izimele kodwa bazokulwela ubudlelwane ukuthi buqhubeke.
“Ubudlelwano bomzabalazo akubona obabaholi abathize nemizwa yabo. “Kubalulekile ukuba khona kombimbi nobudlelwano balo ngoba umzabalazo uyaqhubeka, yonke indawo zikhona izinkinga,” kusho uMnuz Ntuli.
Uthe akanalwazi ngabancishwa ubulungu be-ANC, uqhube wathi uma kunezindawo abancishwa kuzona ubulungu ababike ehhovisi le-ANC eThekwini.